प्रदीप गिरी कुनै पनि राजनीतिक दल स्वभावतः सत्तामा आफ्नो राजनीतिक एकाधिपत्य कायम गर्न चाहन्छन् । तर, यससम्बन्धी दुइटा प्रवृत्ति देखिन्छन् । प्रचलित ऐन-कानुन अर्न्तर्गत चुनाव लडेरै एकाधिपत्य कायम गर्ने एउटा तरिका हो । कानुन र व्यवस्थाको पर्वाह नगरी एकपल्ट सत्तामा आएपछि छाड्दै नछाड्ने अर्को । हिजो सोभियत सङ्घमा वा अहिले चीन, उत्तर कोरियादेखि क्युबासम्मका राष्ट्रहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीएकपटक ठीक वा बेठीक जसरी सत्तामा पुगे पनि त्यसपछि सत्तामाथि एकाधिकार कायम राखिरहकै छन् । जहांजहां हटे, बलपूर्वक हटे । कम्युनिस्टले कहीं पनि स्वेच्छाले सत्ता छाडेनन् ।
कम्युनिस्टहरू दर्शनशास्त्रको क्षेत्रमा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई सत्य बुझ्ने एक मात्र साधन मान्छन् । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने ऐतिहासिक भौतिकवाद/द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको तार्किक प्रणाली नबुझेको मानिसले सत्य नै बुझेको हुंदैन भन्ने मार्क्सवादको आदर्श मान्यता हो । यस अर्थमा मार्क्सवादीले मात्रै सत्ताको सत्य बुझेका हुन्छन् । यो सत्य बुझिसकेपछि किन सत्ता छाड्नुपर्‍यो भन्ने मानसिकता उनीहरूमा देखिन्छ । त्यसैले प्रत्येक कम्युनिस्ट पार्टी विशेसगरी माओवादी पार्टले सत्तामाथि कब्जा जमाउनैपर्ने एउटा मानसिक र भावनात्मक आधार पनि छ । आफूलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीमान्दामान्दै पनि संशोधनवादी बाटोमा गएका अत्यन्त प्रचुर उदाहरणहरू छन् । समाजवादी चिन्तनमा संशोधनवाद शब्दको उत्पत्ति एर्डवर्ड बर्नास्टिनका सम्बन्धमा भएको देखिन्छ । बर्नास्टिन र कार्ल काउत्स्की सोझै मार्क्स र एङ्गेल्सका उत्तराधिकारी थिए । मार्क्स र एङ्गेल्सले मर्ने बेलामा हाम्रा कागजपत्र उनीहरूले सम्पादन गरेपछि मात्रै छाप्नुसमेत भनेका थिए रे । मार्क्सका बांकी रहेका कृतिहरू तिनले नै छपाए । पछि गएर हिंसात्मक क्रान्तिप्रति उनीहरूको विश्वास हट्यो । तर, तिनको तर्क लेनिन र ट्रटस्कीलाई मान्य भएन । र, संशोधनवादीको आरोप लगाए । धेरै कम्युनिस्ट समूहहरू सत्य मेरै कुरो हो, सत्ता त मैले नै राम्रोसंग चलाउनुपर्ने हो तर अब केही लागेन भनेर यस्तो संशोधनवादतिर लाग्छन् । सत्ता कब्जा गर्ने बाटो ग्रहण गर्दैनन् । बरु, सत्ताकै एउटा हिस्सा भएर बस्छन् । जस्तो नेपालमा एमालेले यही बाटो लियो ।
सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले माओवादीले स्टालिनको असफलताबाट पाठ सिक्ने भनेका छन् । तर, लेनिनको असफलताको कुरा गरेका छैनन् । स्टालिन र लेनिनको असफलतालाई संगै जोडेका पनि छैनन् । स्टालिनको असफलताबाट पाठ सिक्ने कुराले हामी प्रसन्न भएका थियौं । तर, स्टालिनको असफलताबाट के पाठ लिने भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेकै रहेनछन् । त्यसैले नचाहंदानचाहंदै पनि उनीहरू त्यही गल्ती दोहोर्‍याउने बाटोतिर जांदैछन् । लेनिनले जस्तै नेपालमा सहरिया जनवविद्रोह गरेर सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम छाडेका छैनन् । तर, मुलुकको ठोस भौतिक र राजनीतिक परिवेश त्यसको पक्षमा छैन । कुनै पनि क्रान्ति सम्पादन गर्न केही पूर्वर्सतहरू चाहिन्छन् । कम्युनिस्ट क्रान्तिहरू ती मुलुकमा सफल भए जहां नागरकि समाजको सशक्त उपस्थिति थिएन । रुसमा बोल्सेभिक क्रान्ति हुंदा लेनिनभन्दा बलिया र मजबुत नेता जर्मनी र इटालीमा नभएका होइनन् । तर, लेनिन मात्र सफल भए । जर्मनी, इटालीलगायत पश्चिम युरोपका अन्य देशहरूमा कसैले चाहेर होइन, त्यहां विकसित भइसकेको नागरकि समाजका कारण कम्युनिस्ट क्रान्ति हुन नसकेको हो । व्यापारीकरण र औद्योगीकरणले गर्दा त्यहांको अर्थतन्त्रमा सशक्त नागरकि समाज उपस्थित भइसकेको थियो ।
पहिलो महायुद्धका बेला जारका रुसी सेना निकै विचलित थिए । व्यापक रूपमा पलायनका घटना भएका थिए, तिनीहरू नै लेनिनका निम्ति ऊर्जा बन्न पुगे । तर, नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन । नेपाली सेनाले घमण्डका साथ भन्ने गरेको छ, “हामी हारेकै छैनौं ।” यो घमण्डमा कति वास्तविकता छ, थाहा छैन । तर, माओवादीले पनि सेनालाई जित्न नसकेको त हुंदै हो । सापेक्ष रूपमा हेर्दा आजको मितिसम्म माओवादीभन्दा नेपाली सेनाको स्थिति बलियो देखिन्छ । सेनासंग भएको बन्दुक र प्रविधिले गर्दा त्यसलाई बलियो भनेको होइन । नेपाली राजनीतिमा जुन वर्गको हालीमुहाली छ, सेनाको ज्यादा संवाद र अन्तरक्रिया त्यसैसंग भइरहेको छ । त्यो वर्ग नेकपा माओवादीको पक्षमा छैन । लेनिनले एउटा वैध निकायको माध्यमबाट सत्ता कब्जा गरेका थिए । त्यहां ‘सोभियत’का नाममा अनेक किसिमका शक्तिहरूलाई समेटेर समानान्तर सत्ता उभ्याइएको थियो । तिनै सोभियतहरूलाई कब्जा गर्दै लेनिन अगाडि बढे । र, अन्त्यमा बोल्सेभिक क्रान्तिमार्फ रुसको द्वैधसत्ता समाप्त पारे । हुनसक्छ, प्रचण्डले त्यो ख्वाब देखिरहनुभएको छ । तर, रुसमा जस्तो नेपालमा द्वैधसत्ताको उदय भएको छैन । त्यसको ‘ग्राफ’बारे उहांको के-कस्तो बुझाइ छ कुन्नि ? रुसमा क्रान्ति गर्दा लेनिन भूमिगत थिए । ‘नोभेम्बर क्रान्ति’का दिनसम्म लेनिनको अवस्था दुइ वर्षघि प्रचण्डको जस्तो थियो । त्यतिखेर लेनिन को हुन् भन्ने कसैलाई थाहा थिएन । उनको रहस्यमयी र भूमिगत छवि पनि क्रान्ति सफल पार्ने एउटा आधार बन्न पुगेको थियो । तर, खुला राजनीतिमा आएपछि प्रचण्डको करिश्मा सिद्धियो । लेनिनमा जस्तो आकर्षण रहेन ।
जनआन्दोलनका बेला राजा ज्ञानेन्द्रले लोकतन्त्र अपहरण गरेको तर देशमा हिंसा र आतङ्क कम गर्न नसकेको परिस्थिति थियो । अनि प्रत्येक मानिसको अवेचतनमा दरबार हत्याकाण्डको विभीषिका थियो । अर्थात् दरबार हत्याकाण्डको विभीषिकाको प्रतिशोध, अहिंसा र प्रजातन्त्रको खोजीबाट आन्दोलनले प्रेरणा प्राप्त गरेको थियो । अब आउने क्रान्ति वा परविर्तनमा त्यस्तो ‘एजेन्डा’ कहां छ ? माओवादीले सांच्चै तेस्रो जनआन्दोलन वा क्रान्ति गर्न खोजेको हो भने पहिले त्यसका लागि चाहिने एजेन्डाहरूबारे उनीहरू स्वयम् प्रस्ट हुन जरुरी छ । तर, उनीहरूको कमजोरी नै के छ भने तिनले आजसम्म जनआन्दोलन गर्नसक्ने मुद्दा नै बनाउन सकेका छैनन् ।
एजेन्डाहरू नभएका वा सकिएकै चाहिं होइनन् । गरिबी, बेरोजगारी, विकृति, दुर्रदशा भएको मुलुकमा जनसरोकारका मुद्दाको कमी छैन । तर, त्यसका लागि परकिल्पना चाहिन्छ । अनि त्यो परकिल्पना व्यावहारकि पनि हुनुपर्छ । माओवादी नेताहरूको लेख पढ्दा, कुरा सुन्दा उनीहरूले यो बुझेजस्तो लाग्थ्यो । किनभने उनीहरू बारम्बार भन्थे- हामी सोभियत युनियनको असफलता दोहोर्‍याउन चाहंदैनौं, हामीले चीनको गल्ती बुझेका छौं, नेपालमा हुने एक्काइसौं शताब्दीको जनवादी क्रान्ति बेग्लै किसिमको हो आदि । उनीहरूले आफ्ना दस्तावेजहरूमा रोजा लक्जेमबर्ग र एन्टोनियो ग्राम्सीको नामसमेत उल्लेख गर्न थालेका थिए । तर, खुला वातावरणमा आएपछि यसलाई बिर्सिए । जुन जनआन्दोलनको प्रभावमा एउटा नयां क्रान्तिको परकिल्पना गरेर झन् बृहत्तर ऊर्जा जुटाउनुपथ्र्यो, त्यो काम उनीहरूबाट हुन सकेन ।
साभार: नेपाल पाक्षिक, फेब्रुअरि २००८ FacebookTwitterLinkedInGoogleEmailLike this:Like Loading...
This entry was posted on फ्रेवुअरी 16, 2008 at 3:02 अपराह्न	and is filed under Maoist, Politics.
Tagged: लेनिन होइनन् प्रचण्�. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.